राज्य पून:र्संरचनाबिनाको संविधानको अर्थ के ? – Janaubhar
राज्य पून:र्संरचनाबिनाको संविधानको अर्थ के ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ १८, २०६८ | 140 Views ||
सबै संरचना नयाँमा रुपान्तरण भएको नेपाललाई हामी नयाँ नेपाल भनिरहेका छौँ । यो रुपान्तरणको काम नयाँ बन्ने संविधानले गर्छ । हामीले देख्यौँ र भोग्यौँ तीन वर्षमा संविधान बनेन । नेताहरुले जनतामाथि धोका दिएर र अविश्वास जन्माइदिए । त्यसकारण अहिले हामी माग गरिरहेका छौँ जसरी भएपनि हामीलाई नयाँ संविधान चाहिन्छ, जस्तो भएपनि संविधान चाहिन्छ । पुरानो अस्तित्वलाई बचाउन चाहने शासकहरु जनतालाई थकाउन र गलाउन चाहिरहेका छन् । अहिले नागरिक तहबाट आवाज उठिरहेको छ जस्तो भएपनि एकथान संविधान बनिदिए त यो पट्यारलाग्दो निराशा र अस्थिरताको अवस्था त झेलिराख्नुपर्ने थिएन । अब प्रश्न उठ्छ- के प्रतिकृयावादीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी जस्तो पायो त्यस्तै एक थान संविधान मात्र हामीलाई चाहिएको हो ? अग्रगमन र परिवर्तन स्वीकार नगर्नेले राज्यको रुपान्तर वा पूनःर्संरचना चाहिरहेका छैनन् र उनीहरु जनताको शक्तिलाई थकाएर, गलाएर सामान्य सुधारको संविधान लेख्न दिएर जनताको पूर्ण अधिकारलाई कटाएर आफूले राख्न चाहिरहेका छन् । यो पहिलो कुरा भयो ।
दोस्रो कुरा, यो देशमा जनताले गरेको वलिदानपूर्ण आन्दोलनको इतिहास धेरै लामो भइसकेको छ र आनन्दोलनपछि अधिकारहरु खोसिएर धोका खाएका घटनाहरु पनि दोहरिरहेका छन् । जनताले अब आफ्ना सम्पूर्ण अधिकारसहितको संघीय राज्य चाहेको छ । बहुसङ्ख्यामा रहेको सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र र जातीले आˆनो पहिचानसहितको स्वतन्त्रता र अवसरको समान हक चाहेको छ । जनताले शोषण र अन्यायरहित परिवर्तन र उन्नतशील समाज चाहेको छ । आˆनो सङ्घर्षले आर्जेको राम्रो फसल उसले नयाँ घरमा भित्रयाउन चाहेको छ । त्यो हिसावले बर्षौदेखि उत्पीडन र चर्को दोहन सहँदै आएको जनता यो बेला आˆनै इतिहासलाई कायापलट गर्ने इतिहासको सर्वाधिक मूल्यवान् र सुन्दर जीवनको अस्तित्वमा आफूलाई उभ्याउने समयभित्र आएको छ । यसका लागि यो राज्यको पुनःर्संरचनाबिनाको नयाँ संविधानको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । मुलुकले जरैदेखि नयाँ संरचना चाहेको छ । सानोतिनो आलटाल र तुनतानको संविधानले स्थायी शान्ति ल्याउन सकिने कुरामा विश्वास गर्न सकिदैन । यो बोध जनतालाई नयाँ व्यवस्थामा लैजान चाहेका दलहरुले राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन् । र, उनीहरु संविधानमा विवादित विषयहरुलाई पन्छाएर वा पर सारेर मिलेका जति कुराहरुको मस्यौदा संविधान दिएर सरकार र कुर्सीको राजनीतिमा लम्किन चाहिरहेका छन् ।
तेस्रो कुरा, अहिले दलहरुमा मिलेका जति कुराहरुको मस्यौदा तयार पारी विवादित कुराहरुलाई पछि टुङ्गाउँदै जाने पक्षमा नेताहरु देखिएका छन् । यो जनताका लागि धोका मात्र नभई घात हुन जान्छ । नयाँ संविधानको मुख्य सारवस्तुभित्र राज्यको पुनःर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली आदि पर्दछन् । यी कुराहरुको टुङ्गो नलागि बन्ने संविधानको खाका वा मस्यौदा खाली जनता टोपल्ने र परिवर्तनको सारतत्वलाई अपहरणमा पार्ने खेल मात्रै हुन जान्छ । र माथि उल्लेख गरिएजस्तै जस्तो भएपनि संविधान देऊ भन्दा अधिकारहरु गुम्ने र खोसिने खतरा रहेको छ । मस्यौदाका रुपमा सानो संविधान जारी गरिदिने त्यसपछि मुख्य विषयवस्तुलाई पन्छाउँदै गएर हराएर जाने नेपालको रीति नै छ । राज्यको पूनःर्संरचनाको कुरामा पनि त्यसो नहोला भन्न सकिन्न । अहिले दलहरुबीचको सैद्धान्तिक लडाई पनि राज्यको पुनःर्संरचनाका बारेमा नै रहेको छ । यो एक किसिमको वर्गीय अस्तित्वको प्रश्न पनि हो । बहुसङ्ख्यक गरिब वर्गका जनता राज्यको पुनःर्संरचना उत्पीडित जाती, जनजाती, पछाडि परेको भूगोलको आधारमा अधिकारको प्रत्याभूतिसहित होस भन्ने चाहन्छ भने जुन शक्ति जनताको दबावमा छ तर राज्यको अस्तित्व पुरानै सामन्ती परिपाटीबाट चाहन्छ । उसले पडाडि पारिएका जाति, वर्ग र लिङ्गका जनतालाई अधिकार दिने पक्षबाट नभई संभ्रान्त वर्गको रक्षालाई अगाडि राखी राज्यको पुनःर्संरचना चाहेको छ ।
अब कुराको निष्कर्षमा अधिकांश जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व बोकेको पार्टी एकीकृत माओवादीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि जनताको पूर्ण अधिकारका लागि सम्झौताहीन ढंगले उसले जनताको सच्चा प्रतिनिधिको काम गरिराख्नुपर्छ । संविधानको खोस्टो दिने नाममा सबै सारलाई छोडिदिएर मस्यौदा संविधानमा माओवादी अल्झियो र राज्यको पुनःर्संरचनाको पाटोलाई पन्छाउँदै गयो भने उसको अस्तित्व पनि जनतामा रहने छैन । असली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले जनताका एजेण्डामा सम्झौता गरी उनीहरुले पाउने अधिकारलाई थोरैपनि अङ्कुश लगाउने काम गरियो भने त्यो भन्दा ठूलो अपराध अरु हुन सक्दैन । अतः नयाँ संविधान राम्रो र हाम्रोका साथै पूर्ण संविधान चाहिन्छ र राज्य पुनःर्संरचनासहितको नयाँ नेपालको संविधान चाहिन्छ । ढिलै भएपनि देशले युगान्तकारी परिवर्तन खोजेको क्रान्तिकारी संविधान चाहिन्छ ताकि जनताले अधिकारका लागि पटक पटकको अशान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।
Prevअन्योलग्रस्त अवस्थामा संविधानसभा
Nextसेना समायोजनका चुनौतीहरु